घरटर्कीटर्कियन एजेज कोस्ट45 Manisaफोक्सवैगन मनिषा कारखाना कहाँ स्थापना गर्ने?
17 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 45 Manisa, टर्कियन एजेज कोस्ट, साधारण, राजमार्ग, टायर व्हील प्रणाली, HEADLINE, टर्की 0
भोलक्सवागन मनिषा कारखाना स्थापना गर्न को लागी
उनले भने, व्यापारमन्त्री रुहसार पेक्कन, जर्मनीका कार निर्माता भोक्सवागनले मनिसामा कारखाना खोल्नेछन्। Pekcan, उहाँले टर्की मा सकारात्मक दृष्टिकोण जर्मन उत्पादकहरु लगानी गर्न भन्नुभयो।
सीएनएन टर्क Hakan Çelik को Pekcan कार्यक्रम उपस्थित, टर्की गर्न वोक्सवैगन गरेको लगानीको मूल्यांकन। पेक्कनले भने, “हामी जर्मन वाणिज्य मन्त्रालयबाट केहि सुझाव पनि पाउँछौं। तिनीहरूले टर्की हामीलाई पक्षमा निर्णय थियो भन्छन्। टर्की वोक्सवैगन लागि नयाँ उत्पादन कार लागि सकारात्मक देख छ। हामीले हाम्रा जर्मन मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा ग .्यौं। उनीहरूले यस्तो बयान गरे। यो मनिसामा सम्पन्न हुनेछ, यो क्षेत्र पनि निश्चित छ, तर त्यो मन्त्री वरकको कार्य क्षेत्र ताबीको विषय हो।
Pekcan, कमर्स को जर्मन मंत्रालय आधिकारिक यो लगानीको लागि टर्की पक्षमा लिएको निर्णय प्रतीक्षा व्यक्त कि ल्याएको बताए।
टर्की गर्न वोक्सवैगन नयाँ कारखाना Elects 13 / 07 / 2019 नयाँ बिरूवा लगानी गर्न जर्मन कार निर्माता वोक्सवैगन एजी निर्णय टर्की देखि प्रयोग भएको थियो। वोल्क्सवैगन एजी, विश्व ओटोमोबाइल उद्योगका प्रमुख जर्मन ओटोमोबाइल विशालले नयाँ कारखाना खोल्ने काम शुरु गरेको छ र यो कारखानाको लागि ठाउँ खोज्दै छ। नयाँ कारखानाको स्थान, जुन एक्सएनएनएक्सएक्स हजार मान्छेहरूको लागि व्यापारको गेटवे हुनेछ, घोषणा गरिएको छ। कम्पनीले अन्तमा यसको अत्यधिक प्रत्याशित नयाँ कारखानाको निर्णय गर्यो। वोक्सवैगन, जसमा अडी, स्कोडा र सीट समावेश छ, इजमिर नजिकैको नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नेछ। Bulgarsit र Volkswagen'n कारखाना Izmir टर्की वरिपरि निर्माण गरिनेछ बीच चयन गर्न लामो समय को लागि काम गर्ने सुरक्षित गरिएको छ। ...
माल्टाया वैगन मरम्मत फैक्ट्री चाइना फैक्ट्री प्राप्त गर्नुहोस् 13 / 11 / 2012 माल्टाया वैगन मरम्मत कारखाना खुला खुला जेलको रूपमा माल्टाया गलत हुनेछ भन्ने तर्क गर्दछन् कि एक खुल्ला उद्घोषणाका अध्यक्ष गुङ्गोरले यसो भने: ası हामी कैदी खोल्न खोजिरहेका छौं। वैगन मरम्मत कारखाना अब एकाधिकार र चीनी कारखानाबाट अलग हुनेछैन। तिनीहरूले शहरबाट जेल जाने प्रयास गरे, तर मेट्रोपोलिटन क्षेत्र बन्न पछि, यो क्षेत्र जहाँ वगन मरम्मतको कारखाना स्थित छ त्यस शहरमा छ। अर्को शब्दमा, कैदी शहरमा हुनेछ। यानी गुङ्गोरले आफ्ना शब्दहरूलाई निम्न रूपमा निम्न रूपमा राखे: '' हामीले लामो समयसम्म वैगन मरम्मत कारखानाको लागि काम गर्यौँ। हामीले कारखानाको लागि व्यवहार्यता बनायौं र उद्योग मंत्रीलाई पठाइयो। हामीले फाईलहरू हाम्रो डिप्टीमा पेश गरेका छौं। Önnur Çalik, हाम्रो कामको लागि धेरै न्यानो हेर्न
टर्की पहिलो विमान कारखाना Kayseri Teyyare कारखाना 07 / 12 / 2018 युवा औद्योगिक र संगठन निर्माण आक्रमण गर्न टर्की को गणतन्त्र को पहिलो वर्ष बित्यो। यी लगानीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये एक, केडीई एयर विमान कारखाना 1950 विमानले 130 सम्म उत्पादन गरे। एक राज्य नयाँ युद्धबाट उत्पन्न भएको छ, एक देश आफ्नो बिरुवाबाट बगाएको। देशका धेरै भागहरू फलामका साथ बुना भएका थिए, धेरै कारखानाहरू खोलिएका थिए। यी सुविधाहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्ये केडीई विमान कारखाना थियो। प्रथम विश्वयुद्ध र युद्धको स्वतन्त्रताले साबित गर्यो कि विमानहरू प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण थिए। युवा चाँडै युद्ध पछि टर्की को गणतन्त्र मा विमान उत्पादन गर्न लागे। तिनलाई थाहा थियो कि स्टिकबल आकाशमा थियो। टर्की को गणतन्त्र को संस्थापक, Mustafa Kemal हवाई अड्डा Ataturk, त्यसैले ...
3' पुल पुल, इस्तांबुल जहाँ? 01 / 07 / 2012 अर्को मङ्गलबार, 10 जनवरी इस्तांबुलको लागि एक महत्त्वपूर्ण दिन हो। किनकि3पुल को निविदा आयोजित गरिनेछ! यद्यपि वनस्पतिको संकाय, नागरिक समाजले इस्तांबुलका फेफडाहरू नबुझेको ", कसले हेरे? चुनाव भन्दा पहिले इस्तांबुललाई3पुल घोषणा गरियो। मलाई पनि भनिएको थियो कि प्रधान मंत्रीले यो मार्ग रोज्नुभयो। 'पागल परियोजना' को घोषणा संग,3पुल को स्थान, जो निविदा गरिएको छैन या जनता संग परामर्श गरिएको छैन, स्पष्ट भयो। निस्सन्देह, अनुकरण पछि। मिडिया, पुल 'प्यारा ब्ल्याक सागर गाँउ' को अनुहार परिवर्तन गर्दिपेईई भ्रमणले एक समूहलाई संगठित गर्यो, "इस्तांबुल ट्राफिक तीन, पाँचसम्म आराम गर्न" भनेर भने, जबकि इस्तांबुलमा 3'inci पुलको अर्को समूह, ठूलो क्षति ...
TÜVASAŞ कहाँ सारिनेछ? 02 / 07 / 2012 "ट्रांसपोर्ट, समुद्री काम र संचार Binali Yildirim पछिल्लो हप्ता बुल्गारिया को लागि वैगन डिलीवरी समारोह मा आफ्नो भाषण मा प्रमुखहरुलाई भ्रष्ट गर्न को लागी V कारखाना अगाडी को लागि Ferizli सम्म। Içinde मैले पछिल्लो हप्ता लेखे। प्रधानमन्त्री य्रिदिरिमका यी शब्दहरू फेजिलीमा एक चिसो स्नान प्रवाह सिर्जना गर्थे, र जो चाहिँ कारखाना चाहन चाहन्थे, प्रायः एयरमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री बिनली यिल्डिरिमले भने कि तिउवासए सा Sakarya मा रहनेछ र साईट मा साइट या अन्य ठाउँमा जारी राख्नु नगर्ने बताए। निस्सन्देह, यसले हेडमा प्रश्न चिन्ह सिर्जना गर्यो। आखिर, धेरै प्रयासहरू बनाइएका छन्। मंत्री Yildirim, TÜVASAŞ कहीं ...
टर्की गर्न वोक्सवैगन नयाँ कारखाना Elects
माल्टाया वैगन मरम्मत फैक्ट्री चाइना फैक्ट्री प्राप्त गर्नुहोस्
3' पुल पुल, इस्तांबुल जहाँ?
TÜVASAŞ कहाँ सारिनेछ?
मंत्री Yildırım: "जहाँ पनि म जान्छ सबैलाई एक तेज रेल चाहन्छ।"
लाइट रेल कहाँ छ?
TCDD कहाँ जाँदैछ
नयाँ उच्च गतिको रेल क्यान्सर कहाँ छ
नयाँ मर्मारमा कहाँ जानुहोस्